China Light awọ SPC click flooring emepụta na suppliers | Utop
Ọkachamara na SPC flooring
SPC flooring na IXPE ụfụfụ
Ìhè na agba ntụ SPC click flooring
FOB Price: US $ 6.5-10.5 / sqm
Min.Order ibu: 200sqm
Tụkwasịnụ Ikike: 20000 sqm / kwa ụbọchị
Embossed ma ọ bụ Ewepụghị ma ọ bụ Hand-kpụchasịrị ma ọ bụ mmetụta
184 * 1220mm ma ọ bụ 151 * 920mm ma ọ bụ ahaziri
3.2mm / 4.0mm / 5.0mm / 5.5mm / 6.0mm
EN ISO 717-1 (E1)
EN 434 (shrinkage ≦ 0,002%; curling ≦ 0.2mm)
EN ISO 717-2 (10dB)
EN660 NWALERE gafere
NFPA klas B
Adịghị enwe mmiri
Ọ dịghị pesti, ọ dịghị nje bacteria
Unilin Click / Valiange, Easy iji wụnye site onwe gị
Ulo, hotel, ụlọ ọrụ, Home, kichin, ahịa, n'ụlọ ọgwụ, Sch
ool na na.
OA, SGS, Ft Akara
Features of Light grey spc click flooring
SPC flooring bụ 100% waterproof, kasị mma maka residential na azụmahịa oghere. The okomoko vinyl flooring bụ mmiri na-eguzogide ọgwụ na ike na ikike gburugburu. Ọ nwere ihe ahụkebe ọkọ nchebe na wears eguzogide na 0.3-0.7 mm wear oyi akwa. The nkume plastic mejupụtara (SPC) isi na-arụpụtara na co-extrusion nke na-eme ya ọzọ inogide na ndị ọzọ isiike karịa omenala vinyl flooring. Ọ dị mfe iji wụnye, na di ntakiri sub-n'ala nkwadebe na oge. The nkasi obi-ike na mkpọtụ Mbelata na-Nọsi'ike na a tupu mmasị 1.0 mm IXPE ụfụfụ.
Packages of Light grey spc click flooring
Anyị na-erube nnọọ erube isi na mba mmepụta usoro ụkpụrụ, dị mbụ mmepụta equipments si Germany na Taiwan iji hụ ihe ndị kasị elu extrusion, Rolling usoro na anyị onwe anyị pụrụ iche n'ichepụta nke Ntụziaka ime ka flooring mma, na-eyi na-eguzogide, mụ, inogide na Eco -friendly. E nwere nnọọ ezi aha anyị SPC flooring, anyị flooring dị na a dịgasị iche iche nke ebe, ndị dị otú ahụ dị ka ebe obibi anyị, azụmahịa, ụlọ ọrụ, ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, wdg Ma i nwere ike na-enweta fun nke N'onwe Gị.
Anyị nwere atọ ụlọ mmepụta ihe na 14 mmepụta edoghi na ike na-emepụta 20,000㎡ kwa ụbọchị. Anyị nwere ike ịnapụta n'ime 10 ụbọchị na kacha mma price. Anyị kacha nta iji bụ 200㎡. E nwere 5 usoro nke rigorous quality inspections tupu itinye containers na-ekwe nkwa nke kacha mma mma. Anyị na-enye mma OEM ọrụ maka purchasers si n'ụwa nile. Anyị na-nwere ike inye patent certifications, dị ka UNICLICK2G, UNIFIT5G, Ft Akara, OA na SGS.
R & D pesonel-enyere anyị nọgidere rụọ ngwaahịa mma na ịgagharị ọhụrụ aghụghọ na-edu SPC n'ala ahịa.
Anyị na-enwe 20 ọkachamara International trading mkpara na ihe karịrị afọ 10 nke ahụmahụ na-enye ọkachamara ọrụ.
Hot-ere UTOP SPC flooring a na-eresị ya niile n'ụwa, dị ka United States, na mba Europe, Southeast Asian mba, African mba na na.
Previous: Marble usoro SPC flooring
Next: Okomoko mụ SPC flooring
5mm Non-Ileghara SPC flooring
5mm Unilin Pịa SPC flooring
Pịa mkpọchi SPC flooring
Ịkwanyere SPC flooring
Super waterproof SPC mgbidi panel
Virgin ihe SPC flooring
Okomoko mụ SPC flooring
White okomoko SPC flooring
Ụlọ 1006, Financial Building 001, 598 Zhongshan East Road, Chang'an District, Hebei, China (050000)
NCHỌPỤTA maka PRICELIST
Isiike SPC flooring, Unilin Pịa SPC flooring, Yi Art Wall Panel, Waterproof SPC flooring , Flexible Pvc Skirting, SPC flooring ,